Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Cunnada Cidhibta 2019
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan Cunnooyinka Heels 2019
Daabacaaddii 11aad ee Cunnooyinka Ciribta Khamiista, Ogast 15, waxay diyaar u tahay inay noqoto tii ugu wanaagsanayd! Iyada oo ay ku biireen 13 makhaayado waaweyn oo maxalli ah oo ku soo biiraya, goob qurux badan oo ku taal Wabiga Mississippi ee ku taal Nicollet Island Pavilion iyo raaf iyo xaraashka oo ay ka buuxaan waxyaabo waaweyn, ma sugi karno dhacdada sannadkan. Qaybta ugu fiicana waa 100% ee dakhliga soo gala ayaa lagu taageeraa dadka ku hela Cuntada Lugaha ee Magaalooyinka Mataanaha ah!
Haddii aadan weli iibsan tikidhadaada, halkan ka hel. Iyo haddii aad ku cusub tahay dhacdada, u akhri wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato! Waxa kale oo jira dhawr waji oo cusub oo xiiso leh dhammaantiin oo soo noqda martida!
Magaca maxaa wata?
Cunnooyinka Cidhibtirka waxaa loo maleynayay inay tahay dhacdo halkaas oo kaqeybgalayaashu ay ku raaxeysan karaan kabo moodada ah inta ay ku taageerayaan Cunnooyinka Gawaarida - magaciisuna wuxuu ahaa mid macquul ah. Tartankan loo yaqaan 'Swank Soles Competition' ayaa loo caleemo saaray kabaha ugu casrisan uguna caansan ee la qiyaasi karo ee ka kooban saddex qaybood: Ragga, Haweenka iyo Kooxda. Waxaad ka hubin kartaa wixii dadku soo xirteen sanadkii hore halkan.
Miyaan xiraa cidhib?
Maya. "Heels" ayaa si ballaadhan loogu adeegsaday halkan. Waxaad dooraneysaa qaabka aad u maleyneyso inuu kuugu muuqdo midka kuugu fiican!
Weli ma imaan karaa xitaa haddii aanan xiran kabo qurxoon?
Haa! Ka qeybgalayaasha looma baahna inay galaan Tartan Ciyaaraha Kubadda Cagta laakiin waxaan u maleyneynaa inaad rabto! Ragga, waa kaarka hadiyada $500 ee Martin Patrick 3. Dumarka: dambiil cufan leh oo ay kujiraan $250 RF Moeller Jeweler kaarka hadiyadaha, $50 Cafe Latte kaarka hadiyadaha iyo timo goynta ama manicure-ka Simonson's Salon & Spa. Kooxda ugu fiican waxay helayaan fasal khamriyeed khaas ah oo loogu talagalay 20 qof oo ku jira Wadarta Khamriga & Inbadan!
Waa maxay xaaladda cuntada?
Waa xulasho ka sarreysa-sare oo ah kala-soocid ka timid 13 maqaaxiyo waaweyn oo maxalli ah! Laga soo bilaabo lucys casiir leh illaa tacos-ga loo yaqaan 'ice cream', safka makhaayadaada ayaa daboolay. In badan oo ay u dammaanad qaaddo booskeeda.
Ka waran cabitaannada?
Beer, khamri iyo soodhe ayaa lagu martigaliyay qeybtii hore ee munaasabada oo leh tikityo joogto ah. Kuwa haysta tigidhada VIP, waxyaabahaas waxaa lagu martigaliyay dhacdada oo dhan. Nicollet Island Pavilion sidoo kale waxaa ku yaal baarar buuxa oo leh dhammaan noocyada cabitaannada loo heli karo iibsashada.
Ma jiraa raaf? Xaraashka? Inbadan?
Meals on Heels ayaa caan ku noqday raafkeeda oo ay ku jiraan abaalmarino aad u weyn, laakiin sannadkan abaalmarinnada la bixinayo ayaa ka baxsan kantaroolka. Sidii sanadkii hore oo kale, xaraash toos ah ayaa lagu qaban doonaa munaasabada oo ay ku jiraan VIP suite xaflad soo socota oo Maren Morris ah, safar lagu tagayo oo loo dalxiis tago Mexico oo leh meelo badan oo laga kala doorto iyo tikidhada Southwest Airlines meel kasta oo ka mid ah qaaradaha Mareykanka.
CUSUB SANADKAN: Xaraash aamusnaan ah oo ay ka buuxaan waxyaabo cajiib ah! Tigidhada Suite ee lagu iibiyo Luke Combs show ee Xcel Center? Hubi! Beer khaas ah oo khaas ah iyo basbaaska loo yaqaan 'Able Brewing'? Waxaad sharad! Socdaal cir ah oo kuyaal Twin Cities… oo ay la socoto KDWB's Dave Ryan oo ah duuliyahaaga? Taasi waa halkaas, sidoo kale! Waxaad ka hubin kartaa liiska buuxa ee alaabooyinka la dalbanayo halkan. Xiriiriyaha, waxaad ka abuuri kartaa koonto oo lagugu wargalin karaa marka uu furan yahay qandaraaska. Sidoo kale waad ka qeybqaadan kartaa hadaadan awoodin inaad ka soo qeyb gasho! Tartanka ayaa furan hadda!
SIDOO KALE CUSUB: Miiqal Dhalada oo ay kafaala qaadaan asxaabteena at Brandography. Midkani waa mid fudud. Waxaad helaysaa wareejin loogu talagalay $20 iyo meel kasta oo ay soo degto, waxaad helaysaa abaalmarin! Abaalmarinta waxaa ka mid ah kaararka hadiyadda, tikidhada iyo waayo-aragnimada badan. Qof walba waa guuleyste!
Maxaa kale oo ka dhacaya munaasabadda?
Mahadsanid JCI St. Paul, Taageeraha-jecel Fling the Ring ring ayaa soo noqday! Waxaad heleysaa seddex fursadood oo aad ku ridi karto gambaleelka oo aad ugu guuleysan karto dhalo khamri ah! Waxaan sidoo kale gacanta ku haynaa qol sawir leh si aad ugu diiwaangeliso khibradaada asxaabtaada. Sidoo kale sanadkaan cusub, dhamaan tigidhada heysta waxay heli doonaan casuumaad ay ku codsadaan hees laga qaado munaasabada!
Sideen ku tagaa halkaas?
Waxaan kugula talineynaa gaadiidka dadweynaha, taksiyada iyo barnaamijyada wadaagista wadajirka ah ee loogu talagalay raaxaysiga ugu sarreeya iyo nabadgelyada dhammaan dhacdooyinka ay bixiyaan. Haddii aad qorsheyneyso wadista gawaarida, waxaa jira meelo baarkinka la bixiyo oo xadidan oo ku yaal Nicollet Island Pavilion. Waxaan sidoo kale awoodnaa inaan ku bixinno baarkinka bilaashka ah Dugsiga Sare ee De La Salle laba baloog uun bay u jirtaa Gaadiidka Halo waxay u adeegi doontaa baska inta udhaxeysa munaasabada waana uga mahadcelineynaa taageeradooda!
Wuu fiicanyahay, laakiin ma haysto tikidhada. Xagee baan kahelaa?
Ka hel khadka tooska ah illaa saqda dhexe maalinta dhacdada! Tigidhada sidoo kale waxaa laga heli karaa albaabka Khamiista, laakiin waxay kor u kacaan $5 maalinta dhacdada.
Ogosto 12, 2019